एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको काठमाडौं एक्सप्रेस ! कसले के भने ?
मङ्गलबार, असोज १२ २०७८ ०३:२१ PM
काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौं आएकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरुसँग छलफल गरिसकेकी छिन् । चार दिनका लागि नेपाल आएका फातिमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेट गरी एमसीसीको विषयमा जानकारी लिने र दिने काम सम्पन्न गरी अमेरिका फर्कने तयारीमा छिन् ।
काठमाडौं आउने बित्तिकै द्रुत गतिमा भेटघाटलाई तिब्र बनाएकी फातिमाले नेपालमा एमसीसीको चर्को विरोध भएको समेत थाहा पाइन् । संसदमा पेश भएको एमसीसी पास होला वा फिर्ता होला भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ । एमसीसीका विषयमा मुलुक विभाजित छ ।
फातिमाको नेपाल भ्रमणसँगै राजनीतिक दलबीच मनमुटाव समेत सुरु भएको छ । सत्तागठबन्धन भित्रै दरार उत्पन्न भएको छ । एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएको माओवादी केन्द्र सरकारको प्रमुख घटक हो भने सुरुमा सहमति जनाएको तत्कालीन नेकपा एमाले फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेपछि उसले पनि अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट पास हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । उनीहरुले एमसीसीमा संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवंम नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनका लागि आफूले राजनीतिक स्तरमा छलफल जारी राखेको बताएका छन् । एमसीसी २०१७ मा सम्पन्न अनुदान सम्बन्धी कम्प्याक्ट अगाडि बढाउनका लागि आफूले राजनीतिक स्तरमा छलफल जारी राखेको प्रधानमन्त्री देउवाले फातिमालाई भनेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल,प्रचण्ड, अध्यक्ष,नेकपा माओवादी केन्द्र
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीको विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनाएर अगाडि बढ्न सकिने बताएका छन् । देशको अग्रगमनको संवाहक वर्तमान गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु प्रमुख प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।
केपी ओली अध्यक्ष,नेकपा एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू अहिले प्रतिपक्षमा भएकाले एमसीसीबारे धारणा नबनाएको बताएका छन । सरकारमा हुँदा आफूहरूले एमसीसी संसदमा टेबल गरेको भए पनि केही व्यक्तिहरूका कारण अड्किएको बताए ।
‘हामी सत्तामा हुँदा संसदमा टेबल गरेका थियौं तर सभामुखलगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारण अघि बढ्न सकेन,’ ओलीले भने । तपाईंहरूलाई थाहै छ प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षीको भूमिका के हुन्छ । सत्तारूढ गठबन्धन एमसीसीबारे हामीसँग छलफल नै गरेको छैन । अहिले नै हामीले धारणा बनाउनु हतार हुन्छ ।
डा.बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष, जसपा नेपालका सङ्घीय परिषद
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलहरूबीच सहमति गरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए । नेपालका लागि एमसीसी आवश्यक रहेकोले सबै दलहरुले सहमति गरेर संसदबाट पास गर्न सहजिकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
माधवकुमार नेपाल, अध्यक्ष, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले गठबन्धनका सबै दलसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् । गठबन्धमा रहेका अरू सबै दलसँग छलफल गर्ने र अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई पास गराउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक रहे पनि केही बुँदाहरुमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आइतबार​ २७ भदौ २०७८ ०१:३१ PM मा प्रकाशित